Misangano - Kufa kweAmerica Kugadzira | Martech Zone
Chipiri, Kurume 23, 2010 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nei misangano ichiyamwa? Matanho api aungatore kuti misangano ibudirire? Ndakaedza kupindura iyo yese mibvunzo mune ino inosetsa (asi yakatendeka) mharidzo pamisangano.
Aya maonero akasimbiswa ehurukuro yandakaita ndiri munhu. Iyi mharidzo pa misangano anga achiuya kwekanguva, ini ndanyora pamusoro pemisangano uye kugadzirwa munguva yakapfuura. Ndakaenda kumusangano wematani, uye mazhinji acho anga ari kutambisa nguva kwakaipisisa.
Sezvo ini pandakatanga rangu bhizinesi, ndakaona kuti ini ndaibvumidza yakawanda nguva kuti ndiyamwe pashedhiyo yangu nemisangano. Ini ndakanyanya kurangwa izvozvi. Kana ndine basa kana zvirongwa zvekuita, ini ndinotanga kudzima uye kugadzirisa zvakare misangano. Kana iwe uri kubvunza kune mamwe makambani, nguva yako ndeye zvese zvaunazvo. Misangano inogona kudya iyo nguva nekukurumidza kupfuura ingangoita chero chimwe chiitiko.
Mune hupfumi uko kugadzirwa kunofanira kuwedzera uye zviwanikwa zviri kudzikira, ungangoda kunyatso tarisa pamisangano kuti uwane mikana yekuvandudza ese ari maviri.
Ndanga ndiri pane yekuverenga streki nguva pfupi yadarika uye aya mabhuku anga achindikurudzira maererano nebhizinesi rangu uye neangu kugadzirwa - Seth Godin's Linchpin: Iwe Unokosha Here?, Jason Fried naDavid Heinemeier Hansson's Rework uye Tim Ferriss ' Iyo 4-Maawa Ekushanda Vhiki. Bhuku rega rega rinotarisana neMisangano mavari.
Tags: kufa kwemisanganoMisanganokwezvinhu
Douglas Karr Tuesday, March 23, 2010 Sunday, October 4, 2015
Wedzera Mapeji paKushanya uye Deredza Bounce Rates
Mar 24, 2010 pa 11: 23 AM
Mharidzo yakanaka Douglas, ndatenda nekugovana!
Ndanga ndakakwira bhuku idzva raGodin munguva pfupi yapfuura uye ndawana hurukuro inonakidza nezveLinchpin pa Startups.com. Unogona kuitarisa pano http://bit.ly/b219d6
Mar 24, 2010 pa 11: 44 AM
Misangano yekuronga misangano. Kufa kwechero chikamu chemakambani ndiko kutsiva kwetarenda rega uye kugona pamwe chete kutenga-mukati uye kukanganisa kune yakaderera dhinomineta. Ini ndinobvumirana nezvakawanda izvo Doug anofanira kutaura pano.
Makakatanwa akanaka = makakatanwa ane hutano. Ini ndoda kuenda kumisangano ndato gadzira chimwe chinhu pasina pamwe chete kutenga-mukati. Idaidze "humbowo hwepfungwa" uye unenge wakagara uchivimbiswa Executive buy-in. Edza izvi: zvinovaka, zvinoshanda, uye zvinonetsa vanhu kuti vafunge zvakasiyana.